Author Topic: Su'aal: Gaas Ayaa I haya dawooyinkisana waan qaatay? (Read 2665 times)
« on: January 28, 2017, 07:16:28 AM »
Asc, waxaan waydiinayaa dhakhatiirta sharafta leh labo su'aalood mida hore
1-Gaas Ayaa I haya dawooyinkisana waan qaatay waxaan isku arkay carrabka oo nabro yar yar yeeshay wuuna I xanuuna mararka qaarna layer cadiin ah ayuu yeesha
Arinta gaaska xiriir mala leedahay
2- su'aasha labaad cidiyaha faraha ee gacmaha qeybtooda hoose liidinta cad ee Ku taala caafimaadka qofka xiriir mala leedahay?
Re: Su'aal: Gaas Ayaa I haya dawooyinkisana waan qaatay?
« Reply #1 on: May 04, 2017, 11:30:25 AM »
Gaaska nuuca leh laabjeexa wuxuu saamayn ku yeeshaa carabka iyo dhuunta, laakiin waxaa haboonaan lahayd in nabraha aad shegayso la arko, midda ku saabsan xuubka cad ee afka ku samaysmo, waxay noqon kartaa cabeeb ama umulwo sidaa u taqaani, ama caabuq carabka ku dhacay ama waxyaabo kale.
Dhibicyada iyo xariimaha cad ee cidiyaha ku samayso wax dhib ah ma keenaan, waxayna tilmaan u yihiin badanaa dhaawac hore oo ciddida gaaray inta ay koraysay, dadka qaarne lama yaqaano sababta ay ugu samaysanto.
Views: 33185 January 20, 2018, 03:01:49 PM
Views: 52298 April 29, 2016, 09:52:03 PM
Views: 34172 April 16, 2013, 01:40:49 PM
Views: 33483 March 04, 2011, 09:41:53 PM
Views: 28232 April 21, 2011, 08:48:49 AM